कला/साहित्य/सौन्दर्य खबर – Page5– rastriyakhabar.com
कस्तो दाँत भएका स्त्री वा पुरुषको स्वभाव र चरित्र कस्तो हुन्छ ?
शरीर विज्ञान सम्बन्धी समुन्द्र शास्त्रका अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिको स्वभाव र चरित्र ब्यक्तिको दाँत हेरेर अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँ समुन्द्र शास्त्रका अनुसार कस्तो दाँत भएका स्त्री वा पुरुषको स्वभाव र चरित्र कस्तो हुन्छ? -जुन स्त्रीको दाँत केही बाहिर नस्किएका हुन्छन् त्यस्ता स्त्री बढी बोलने र..
सेक्स दिमागको मात्र चाहना होइन, यो त हाम्रो समग्र शरीर, पूरै अस्तित्व र प्राणको आवश्यकता हो
समयशून्यताको अनुभूति अर्गाज्म अर्थात् यौन समागमका बखत महसुस हुने चरम सुखसँगै समयशून्यताको अनुभूति हुन्छ । मानिसले स्वयंलाई भुल्दछ र अगाध आनन्दसागरमा विलिन हुन्छ । तान्त्रिक पद्धतिको ज्ञान नभएका मानिसका निम्ति भने यो अनुभूति क्षणिक हुने हुँदा यसले धेरै महत्व राख्दैन । त्यो अनुभूतिका लागि ऊ..
तपाईलाई थाहा छ, महिलाहरुको कपडामा किन गोजी हुदैन् ?
बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन, “म नारी स्वतन्त्रता र आफ्ना लागि आफै नियम बनाउने विचारकी पक्षपाती हुँ। मलाई चाहिएका समान सँगसँगै बोकेर राख्न ठूलो हण्ड ब्याग बोक्ने गरेकी छु ।” बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री थ्याचरका लागि ह्याण्ड ब्याग बोक्ने कारण यहि भएपनि संसारभरीका..
सेक्सले मानिसलाई जवान रहन मद्धत गर्ने
सोमवार, माघ १५, २०७४ मा प्रकाशित
तपाई नियमित सेक्स गर्नुहुन्छ ? यदी गर्नुहुन्न भने एक पटक सोच्नै पर्छ । सेक्सले मानिसलाई जवान रहन मद्धत गर्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।डाक्टर वीकले गरेको दश वर्षको अनुसन्धान तथा अध्ययनबाट के पत्ता लागेको छ भने जोडीको यौनजीवनले पनि जवान देखीन मद्दत गर्छ । जुन जोडी नियमित सेक्स गर्छन् उनीहरू आफ्नो..
अनुहार सफा देखिने छ चमक, जान्नुहोस् ५ नियम
धेरै मानिसले अनुहार सफा गर्न फेसवास वा क्लिन्जर प्रयोग गर्छन् । तर,कस्तो फेसवास कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेचाहिँ धेरै कमलाई मात्र जानकारी हुन सक्छ । अनुहार सफा गर्ने पनि आफ्नै नियम छन् । गलत ढंगले अनुहार सफा गर्दा छालासम्बन्धी विभिन्न समस्याको सिकार हुनुपर्ने हुन्छ । अनुहार सफा गर्दा हुने स–साना..
ढिलो आमा बन्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ख्याल राख्नुहोस् !
शनिबार, माघ १३, २०७४ मा प्रकाशित
यो शास्वत सत्य हो की जब महिलाको उमेर ढल्किँदै जान्छ, उनीबाट सन्तानको सम्भावना पनि घट्दै जान्छ । हालै सार्वजनिक भएको अध्ययनमा आफू ‘अझै पूर्ण आमा नभएको’ भन्दै हजारौं महिलाहरुले सन्तान जन्माउन ढिलाई गर्ने क्रम बढ्दो छ। ब्रिटिश प्रिगनेन्सी एडभाइजरी सर्भिसले तयार गरेको सो अध्ययन अनुसार दुई तिहाई..
तौल घटाउने नाममा नगर्नुहोस् यी ७ गल्ती
शुक्रबार, माघ १२, २०७४ मा प्रकाशित
जिरो क्यालोरी डाइट शरिरको फ्याट खर्च गर्न शरिरलाई असंतृप्त फ्याटको आवश्यक पर्छ। तौल घटाउने नाममा तपाईं कृत्रिम गुलियो र पेय पदार्थ पिउन सक्नुहुन्छ। जुन तपार्इंको स्वास्थ्यको लागिहानिकारक हुन सक्छ। औषधी तथा पिल्स सजिलै तौल घटाउन कहिल्यकाहिँ हामीले औषधी तथा पिल्स खाने गर्छौ । तर, यसले तपाईको..
दम्पतीबीच खटपट भइरहन्छ ? यसो गर्नुस
बुधबार, माघ १०, २०७४ मा प्रकाशित
पती-पत्नीबीच कहिले कही मनमुटाव हुन्छ । कति कुरामा विमति हुन्छ । भनाभन हुन्छ । झगडा हुन्छ। पारिवारिक जीवन चलाउने कुरामा यस्ता खटपट हुनु सामान्य हो । तर, यो क्रम पटक पटक दोहोरिन्छ भने त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन । पति-पत्नीबीच उत्पन्न यस्ता मतभेतले क्रमस दुबैको सम्बन्धलाई चिरा पार्दै लान्छ । र, यो क्रम..
यी हुन् संसारका सबैभन्दा अनौठा महिला, शरीर देखेर अल्मलिन्छन् मान्छे
सोमवार, माघ ८, २०७४ मा प्रकाशित
एजेन्सी। संसारमा यस्ता कैयौं महिलाहरु छन् जसको शरीर कुनै आश्चर्यभन्दा कम छैन। कसैको शरीर भीमकाय छ त कोही रबरझैं लचकदार छन् । यिनीहरुलाई पहिलोपटक देख्दा विश्वास गर्नै मुस्किल हुन्छ। आज हामीले यस्तै महिलाहरुको बारेमा तपाइँलाई बताउँदैछौं । पिक्सी नामकी यी मोडलको कम्मर मात्रै १६ इन्चको छ। बार्बी..
सुन्दर देखिन नियमित सेवन गर्नुहोस यस्ता चिज
आइतवार, माघ ७, २०७४ मा प्रकाशित
हरेक मान्छेलाई सुन्दर देखिने मन हुन्छ । अनुहारको छालालाई सौन्दर्यको प्रतिक मानिन्छ । अनुहारको छाला चम्किलो बनाउन धेरैले धेरैथरीका उपाय अपनाउँने गरेका छन् । सुन्दर देखिन थुप्रै खर्च गर्ने मानिस पनि थुप्रै छन् । तर, छाला शरीरकै अंग भएकाले बाहिरी कुराले भन्दा खानेकुराका कारण छाला प्रभावित हुन्छ । छाला..
जापानी महिलाहरुकाे छाला राम्रो र गोरो कसरी ? यस्ता छन् उपाय
बिहिबार, माघ ४, २०७४ मा प्रकाशित
धेरै मानिसहरु गाेराेपना र मुलायम छालाकाे लागि धेरै थरीका फेयरनेस क्रिमहरु प्रयाेग गर्ने गर्छन् । यस्ता क्रिमहरुले त्यति मानिसहरुलाइ एकैछिनकाे लागि गाेराे देखाएपनि त्यसले विभिन्न साइड इफेक्ट पनि गर्न सक्छ । अाज हामी जापानकाे एक यस्ताे परम्परागत घरेलु विधि बताउन गइरहेका छाैं त्यसलाइ अपनाएमा..
बुधबार, माघ ३, २०७४ मा प्रकाशित
हामी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ । सुन्दर, गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ । क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ। तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । अनुहार चम्काउन र सफा बनाउन सक्ने घरेलु उपाय धेरै छन : १.यदि चर्को घाममा तपाईंको छालाको रङ फिक्का या..
नोजाको दोश्रो बार्षिर्कोउत्सव भव्यतापूर्वक सम्पन्न,अनलाइनलाई सहुलियत दिन्छौ, सञ्चारमन्त्री बस्नेत (फोटो फिचर सहित )
भरतराज उप्रेती । देशभर रहेको अनलाइन न्युजहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय अनलाइन पत्रकार संघ नोजाको दोश्रो बार्षिर्केउत्सव समारोह २०७४ पौष २७ गते नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ। सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको प्रमुख आत्थ्यितमा भएको उक्त कार्यक्रममा पर्यटन..
आँखामा आँसु आउँछ र सुकेपछि बिस्तारै आँखा सुक्खा हुन जान्छ । टाउको दुख्ने, आँखा हेर्न गाह्रो हुने, बिझाउने, घाममा हेर्न गाह्रो हुने, आँखा थाकेजस्तो हुने, आँसु आइरहेझैँ लाग्यो भने आँखा सुक्खा हुने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्या आउन नदिन कृत्रिम औषधि हालेर आँखाको हेरचाह गर्नुपर्दछ । -आँखा सुक्खा हुनबाट बच्न..
यसकारण महिलाको दिमाग पुरुषको तुलनामा बढी सक्रिय हुन्छ
बुधबार, पुस २६, २०७४ मा प्रकाशित
महिलाको दिमाग पुरुषको तुलनामा विशेषगरी ध्यान केन्द्रित गर्न, आवेश नियन्त्रण गर्न, भाव तथा तनावको क्षेत्रमा बढी सक्रिय हुने गर्छ । एक अध्ययनअनुसार उक्त तथ्य पत्ता लागेको हो । अध्ययनमा ४६ हजार ३४ मस्तिष्कको इमेजिङ अध्ययन गरिएको थियो । जसमा महिलाको दिमाग पुरुषको तुलनामा केही क्षेत्रमा बढी सक्रिय भएको..